छिन्ताङ घटनाममा मृत्यु भएका १६ जना ३८ वर्षपछि सहिद
काठमाडौं २८, पुस । सरकारले ३८ वर्ष अघि पञ्चायतकालमा छिन्ताङ घटनामा मारिएका १६ जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले धनकुटाको खोकु छिन्ताङमा २०३६ सालमा तत्कालीन मालेले गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रममा सरकारी पक्षले गोली चलाउँदा १६ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यतिबेला सूर्यबहादुर
चिसोबाट तराईमा २८ जनाको मृत्यु
काठमाडौंँ, पुस २८ गते । तराई मधेसका कतिपय जिल्लाहरूमा बढेको चिसो र शीतलहर समेतले कम्तीमा २८ जनाको मृत्यु भएको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार चिसोबाट बालबालिका र वृद्धवृद्धा नराम्रोसँंग प्रभावित भएका छन् । चिसोका कारण मर्नेमा पनि वृद्धवृद्धा र बालबालिका बढी छन् । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता मनोज न्यौपानेले
गणतन्त्र स्थापना ११ वर्षपछि औपचारिक रुपमा पृथ्वी जयन्ती मनाइयो
काठमाडौँ, २७, पुस । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको ११ वर्षपछि औपचारिक रुपमा सरकारले राष्ट्रिय एकता तथा २९६ औं पृथ्वी जयन्ती मनाएको छ । पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको छ । आधुनिक नेपाल एकीकरणका अभियन्ता श्री ५ बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहको सम्झनामा मनाइने उक्त दिवस गणतन्त्र
कांग्रेसको पार्टी प्रवक्तामा विश्वप्रकाश शर्मा
काठमाडौं २५, पुस । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको प्रवक्तामा युवा नेता विश्व प्रकाश शर्मालाई मनोनयन गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा २४ (३ं) बमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य शर्मालाई पार्टीको प्रवक्तामा मनोनयन गरेका हुन्। विद्यार्थी राजनीतिबाट पार्टी राजनीतिमा
प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष एवम् सांसद डा. बाबुराम पोखरेलको निधन
ललितपुर २३, पुस । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष एवम् सांसद डा. बाबुराम पोखरेलको निधन भएको छ । उहाँ फोक्सो र मुटुको रोगबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो । उनलाई गाह्रो भएपछि अस्पताल लैजादै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकूलपति प्रा.डा तीर्थ खनियाँले
लालबाबु भन्छन्, ‘सरकारको राजीनामा राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्म कुर्छौ’
काठमाडौं, २२ पुस । नेकपा एमालेका पोलिटव्यूरो सदस्य एवम् नवनिर्वाचित सांसद लालबाबु पण्डितले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्म यो सरकारलाई आफूहरुले कुरेर बस्ने यदि निर्वाचनपछि पनि रुंगेरै बसिरह्यो भने धकेलेर बाहिर फालिदिने चेतावनी दिएका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा
राष्ट्रिय सभाको चुनाव माघ २४ गते गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं– सरकारले राष्ट्रिय सभा गठनका लागि माघ २४ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको आकस्मिक बैठकले माघ २४ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि निर्वाचान आयोगले माघ २५ गते निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेको थियो । आयोगले पुस २५ गतेसम्मलाई दल दर्ता आह्वान गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक बालुवाटारमा, राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति तोकिने
काठमाडौं २१, पुस । सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति घोषणा तयारी गरेको छ । पाँच दलसँग सहमति नजुटेपछि सरकारले निर्वाचन आयोगसँग सल्लाहगरी मिति तोक्न अहिले मन्त्रीपरिषद्को वैठक बसिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको परामर्शका क्रममा आयोग पदाधिकारीले माघ २५ गते मिति तोक्न भनेका थिए । यसबारे प्रधानमन्त्री
केपी ओली अनुपस्थित भएपछि बालुवाटार वैठक निर्णयविहीन
काठमाडौं २०, पुस । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली अनुपस्थित भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार बालुवाटारमा बोलाएको पाँच दलको वैठकमा कुनै निर्णय नगरि टुंगिएको छ । नेता ओलीको अनुपस्थितिमा सरकारले अघि सारेको प्रस्तावमा वामगठबन्धनका नेताहरुले ठोस धारणा राख्न नसकेपछि
प्रधानमन्त्रीले बोलाए पाँच पार्टीको बैठक
काठमाडौं १९, पुस । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी सदरमुकाम तोक्न राजनीतिक सहमति जुटाउन सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । पाँच राष्ट्रिय पार्टीलाई बोलाइएको बैठक बिहीबार बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्न लागेको हो । राजनीतिक सहमति खोज्न
सरकारले तोक्यो प्रदेशको अस्थायी राजधानी
काठमाडौं, १८ पुस– सरकारले ७ वटै प्रदेशका राजधानी तोक्ने गरी मुकामहरुको खाका तयार पारेको छ । यसको औपचारिक घोषणा भने भइसकेको छैन । यद्यपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शहरी विकास मन्त्रालयले ७ वटै प्रदेशका राजधानीको खाका तयार गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद
अखिलको आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप,रत्नपार्क क्षेत्र तनावग्रस्त
काठमाडौ १८,पुस । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको समानुपाति नजिता प्रकाशन नगरेको विरोधमा एमाले निकट अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरास्ववियु निकालेको ‘मुर्दा जुलुश’मा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा दुबै पक्षबीच झडप भएको छ । त्रिचन्द्र क्याम्पस सडकमा
ओली बिरामी, राजनीतिक भेटघाट बन्द
काठमाडौं १८, पुस । नयाँ सरकार गठन पक्रियामा छलफल चलिरहेका बेला नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिरामी परेका छन् । केही दिनदेखि राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय रहेका ओली बिरामी भएर मंगलबार बिहानैदेखि घरमै आराम गरिरहेको ओलीका प्रेस सहयोगी चेतन अधिकारीले बताए । अधिकारीका अनुसार ओलीलाई सामान्य खालको झाडा पखाला
मेलमिलापको नीति अहिले पनि सान्दर्भिकःदेउवा
काठमाडौं १७,पुस, मिलन बिक्रम सिंह बस्नेत । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता विशेश्वर कोइरालको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अहिलेपनि उत्तिकै सान्दर्भिक र समयसापेक्ष भएको टिप्पणी गरेका छन् । सविधान कार्यान्वयनको चरणमा राजनीतिक सहमति अझै खड्किएकाले सबै दल तथा विचारधारा
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन मिति चाँडै
काठमाडौँ, पुस १५ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा केही दिनभित्रै राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताउनुभएको छ । साथै प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपतिसँग परामर्श गरेर प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति पनि छिट्टै हुने जानकारी दिनुभएको छ । निर्वाचन आयोगका
नेविसंघमा विवाद बल्झियोः संस्थापन र पौडेल पक्षको छुट्टाछुट्टै भेला
काठमाडौं १४,पुस । चुनाव हारेको पीडा सेलाउन नपाउँदै नेपाली कांग्रेसको भातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघमा विवाद बल्झिएको छ । नेविसंघका अध्यक्ष नैनसिंह महरको कार्यशैलीप्रति रुष्ट समूहले छुट्टै भेला मार्फत संघप्रतिका विमति सार्वजनिक गर्दैछ । यसको नेतृत्व वर्तमान कार्यसमितिका उपाध्यक्ष उर्मिला थपलिया,नविन
माघ पहिलो साता सरकार बन्छःज्ञवाली
भक्तपुर १३, पुस । एमाले केन्द्रीय सचिव प्रदीप ज्ञवालीले आगामी माघ पहिलो साताभित्रै वामगठबन्धनको सरकार गठन हुने बताएका छन् । रफत सञ्चार क्लबमा आज (बिहीबार) आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै सचिव ज्ञवालीले माघ पहिलो सातमै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताएका हुन् । उनले
जुम्ला १२, पुस । कठ्याङ्ग्रिने जाडो बढ्दै गएपछि कर्णाली क्षेत्रको जनजीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको छ । अत्यधिक जाडोका कारण यहाँका नागरिकका लागि बिहान बेलुकाको समय सकसपूर्ण छ । जाडोका कारण तल झर्नेहरुको पनि त्यत्तिकै ओइरो छ । हवाईजहाज मात्र नभई गाडीमा दक्षिण झर्नेहरुको भीड छ । अत्यधिक चिसोबाट वृद्ध,
सांसदको पहिलो काम अनुदानको चामल कार्यकर्तालाई
दाने बोहरा/हुम्ला जनतालाई विकासको ठुलठूला आश्वासन बाडेका नव निर्वाचित सांसदहरुले सर्वासाधारणको भागको अनुदानको चामल कार्यकर्तालाई बाडेका छन् । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ४ महिनापछि बल्लतल्ल ढुवानी गरिएको अनुदानको खाद्यान्न सांसदहरुले चिटमार्फत कार्यकर्तालाई वितरण गरेका हुन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका
रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा मेयर र उपमेयर वीच विवाद चर्कियो
काठमाडौं ११, पुस । रानीपोखरी पुनर्निर्माणका विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गी वीच विवाद चर्केको छ । रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गरिँदा पुरातात्विक महत्वलाई ध्यान नदिइएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला सोही विषयमा मेयर र उपमेयरबीच पनि विवाद बढेको हो । रानीपोखरी
मिडिया स्कुलमा ३ महिने व्यावसायिक पत्रकारिता तालिम शुरु
काठमाडौं १०, पुस । मिडिया स्कुल चावहिलले ३ महिने व्यावसायिक पत्रकारिता तालिम सञ्चालन गरेको छ । तालिमको वरिष्ठ पत्रकार विजय चालिसेले उद्घाटन गरे । सो अवसरमा पत्रकार चालिसेले तालिम ‘न्यूज रुम र क्लास रुम’ बीचको दूरी घटाउन उपयोगी बन्ने धारणा व्यक्त गरे । कार्यक्रममा कलेज अफ जर्नालिज्म एण्ड मास कम्युनिकेसन
काठमाडौं– इसाई धर्मावलम्बीहरुको चाड क्रिसमसको उपलक्ष्यमा सरकारले सोमबार सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। एक महिनाअघिको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार बिदा दिन लागिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। एक महिनाअघि सरकारले क्रिसमस, तथा पृथ्वीनारायण जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। गत वर्ष क्रिसमसमा
सिलवाललाई पक्रन प्रहरी महानिरीक्षकको आदेश
काठमाडौ ९,पुस नेपाल प्रहरीका प्रमुख महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले पूर्वडिआइजी तथा सांसद नवराज सिलवाललाई तत्काल पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका छन् ।सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार आफूहरु सिलवाललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन वाध्य भएको उच्च प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । सिलवालविरुद्ध महानगरीय प्रहरी
प्रदेश सभा समानुपातिकः कसलाई कति सिट
काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले प्रदेसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरी ७ वटै प्रदेशको समानुपातिकर्फको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार समानुपातिकतर्फ प्रदेश नम्बर २ बाहेक अन्य सबै
कालिकोटमा म्यादी प्रहरीले तलब माग्दा गोली, एकको मृत्यु २ घाइते
कालिकोट ७,पुस । आफूहरुले पाउने तलब कटौती गरेका भन्दै कालिकोटका म्यादी प्रहरीले गरेको आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलाउदा १ म्यादी जवानको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार दिसँसो भएको प्रहरी र म्यादी प्रहरीको झडपमा म्यादी प्रहरी विवेक ऐडीको मृत्यु भएको छ । झडपमा २ जना घाईते भएका छन् । म्यादी प्रहरीले पाउने
अध्यादेशमा सहमति जुटेन, सर्वदलीय वैठक सम्पन्न
काठमाडौं ७, पुस । बल्लतल्ल जुटेको पाँच दलको बैठक निर्णयविहीन भएको छ । नयाँ सरकार गठन र राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले बोलाएको प्रमुख पाँच दलको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको हो । बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष
साहित्यकार प्रेमा शाहको निधन
साहित्यकार प्रेमा शाहको निधन भएको छ ।साहित्यकार शाह नायिका जल शाहकी आमा हुन् । विक्रम संवत् २००२ सालमा बीरगञ्जको श्रीपुरमा उनको जन्म भएको थियो । मदन मेमोरियल स्कुल पढ्दै गर्दा ०१६ मा साहित्यिक पत्रिका ‘शारदा’मा उनको ‘प्रतिक्रिया’ शीर्षकको पहिलो कथा छापिएको थियो । त्यसपछि उनले विभिन्न पत्रिकामा
वाम एकीकरण हुन नदिन माओवादीभित्र आन्तरिक तयारी ?
काठमाडौँ, ६ पुस- नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेबीच नयाँ सरकार गठनअघि नै पार्टी एकीकरण गर्ने गृहकार्य अगाडि बढिरहेका बेला पार्टी एकीकरण नगर्न माओवादीका केही नेताले दबाब दिएका छन् । माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकारअघि नै पार्टी एकीकरणको खाका तयार गरेर मात्र सरकार गठन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी एकीकरणको
सिलवालविरुद्ध कीर्ते मुद्दाको जाहेरी
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप पूर्व डिआइजी एवं ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट नेकपा एमालेका निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य नवराज सिलवालविरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा कीर्ते मुद्दाको जाहेरी दर्ता भएको छ। सर्वोच्च अदालतले डिआइजीबाट राजीनामा दिँदै प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका
टोखामा गोली प्रहार गर्ने चार जना पक्राउ
काठमाडौ ५,पुस काठमाडौंको टोखा नजिकै शिवपुरी वन्यजन्तु आरक्षभित्र महिलालाई गोली प्रहार गर्ने चार जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सुनिल तामाङ, सुशान्त तामाङ, अंकित तामाङ र विजय तामाङलाई प्रहरीले भरुवा बन्दुकसहित पक्राउ गरेको महानगरी प्रहरी परिसरका एसएसपी रविन्द्र धानुकले बताए। गोली प्रहारबाट